Hirshabelle: Waxay dadkeenu dareemayaan deganaansho ka duwan m... | Universal Somali TV
Hirshabelle: Waxay dadkeenu dareemayaan deganaansho ka duwan middii hore
Maamulka Hirshabelle ayaa sheegaya in dadka reer Hirshabelle ay dareemayan xaalad ka duwan middii maalmihii la soo dhaafay ka jirtay Magaalada Baledweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan.
Toddobaadkii hore ayaa waxaa Magaalada Baledweyne hareereeyay fatahaado xoogan oo ka dhashay Webiga Shabelle iyo roobab ka da'ay Gobolka Hiiraan, kuwaa oo dadka ku khasbay in ay guryahooda ka cararaan.
"Waxay dadkeenu dareemayaan deganaansho ka duwan middii maalmihii la soo dhaafay ay dareemayeen, oo ka dhashay fatahaadaha uu sanadkan sameeyay Webiga Shabelle. Xoogihii ay fatahaadaha la lahaayeen xooggaa sidii hore maaha." Ayuu yiri Xasan Cabduqaadir Muudey.
"Waxaa xilligan Magaalada Baledweyne ku sugan Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Hirshabelle, Mudane Maxamed Cabdi Waare, si uu shacabkiisa ula qaybsado xanuunka fatahaadaha. Sidoo kale Wasiiro iyo Xildhibaano ayaa Madaxweynaha ku wehlinaya Magaalada Baledweyne." Ayuu yiri Xasan Cabduqaadir Muudey oo Warbaahinta la hadlay.
"Fatahaaduhu waxay sidoo kale ka jiraan Degmada Mahadaay, waxaana iyadana laga dareemayaa wa xooggaa deganaansho ah. Waxaana Jimcihii gaaray Madaxweyne Kuxigeenka Hirshabelle, Cali Guudlaawe, oo ay wehliyan Gudoomiyaha Gobolka Shabellaha Dhexe, Axmed Mayre Makaraan iyo Xildhibaano ka soo jeedo Degmada Mahadaay." Ayuu yiri Xasan Cabduqaadir.
Waxa kaloo uu yiri "Arrinta fatahaadaha marka ay noqoto waxaa jira gurmadyo ballaaran oo meelo kala duwan ka imaanaya oo gaaraya Magaalada Baledweyne, si loogu qaybiyo shacabkii magaalada ka baxay oo hadda ku sugan duleedyada magaalada."
"Waxaan mahad ballaaran u jeedinaynaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed ee nala wadaagay dareeenkooda iyo intii nasoo gaarsiisay gurmadka walaalnimo. Hirshabelle State waxay diyaar u tahay in ay la shaqayso cid kasta oo ka qayb qaadanaysa garabsiinta shacabkeena dhibaatada soo gaartay." Ayuu yiri Muudey.
Kan-xigaMadaxweyne Lafta-gareen oo gaaray Deg...
Kan-horeCiidanka Amniga Itoobiya oo boqolaal ...
53,503,841 unique visits